मानव जातिलाई चन्द्रमामा पुर्‍याउने माइकल कोलिन्सको निधन - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › बिज्ञान/प्रविधि › विविध
मानव जातिलाई चन्द्रमामा पुर्‍याउने माइकल कोलिन्सको निधन
| ८:०२:१३ मा प्रकाशित
१६ बैशाख, एजेन्सी । मानव जातिलाई चन्द्रमामा पुर्‍याउने पहिलो अभियान एपोलो–११ को एक सदस्य माइकल कोलिन्सको निधन भएको छ । उनी एपोलो–११ मिसनको क्रू–मेम्बर थिए । उनी क्यान्सरबाट पीडित थिए ।
कोलिन्सको ९० वर्षको उमेरमा २८ अप्रिलको दिन निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसी समाचारका अनुसार माइकल कोलिन्स चन्द्रमाको कक्षमा नै रोकिएका थिए भने उनका सहयोगी निल आर्मस्ट्रङ्ग र बज एल्ड्रिन चन्द्रमामा ओर्लिएका थिए । अपोलो–११ अभियान अन्तर्गत २० जुलाई १९६९ मा पहिलो पटक अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा उत्रिएको थियो ।
कोलिन्सको निधनपछि अब एपोलो–११ मिसनको एकमात्र जीवित क्रू सदस्य बज एल्ड्रिन छन् । उनी ९१ वर्षका छन् । एल्ड्रिनले कोलिन्सलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रिय माइक, तपाई जहाँ रहे पनि तपाईंको ऊर्जाले हामीलाई सधैं भविष्यमा नयाँ उचाइ छुन प्रेरित गरिरहने छ ।’
जापानी अर्बपति चन्द्रमाको यात्रामा जान ईच्छुक आठजनाको खोजी गर्दै २ महिना पहिले
चन्द्रमाको सतहबाट झण्डै ४० वर्षपछि माटो र ढुंगाको नमूना संकलन ५ महिना पहिले
प्रहरीको सक्रियतामा अक्सिजन सिलिण्डर सङ्कलन गरी वितरण २ घण्टा पहिले
नेपालमा उपचारको अभावमा धेरै संक्रमितको मृत्यु १७ घण्टा पहिले
राखियाे हेटौँडा अस्पतालमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर १४ घण्टा पहिले
अरुण भ्यालीको हकप्रदमा आवेदन दिन आइतबार अन्तिम दिन १३ घण्टा पहिले
गायक प्रताप दासको स्वरमा रहेको माया सार्वजनिक ८ घण्टा पहिले
कोरोना भाइरसबाट बाकेमा थप पाँच जनाको मृत्यु १४ घण्टा पहिले
संक्रमणले मृत्यु भएकी श्रीमतीको अन्त्यष्टि श्रीमानले गरे ४ दिन पहिले
चितवनका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत ८ संक्रमितको मृत्यु ४ दिन पहिले
बाँकेमा थप आठ संक्रमितको मृत्यु ७ दिन पहिले
जेठको दोस्रो सातासम्म सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरु बन्द हुने ४ दिन पहिले
जरेवरबाट देखिएको माछापुच्छ्रे हिमाल ५ दिन पहिले
अक्सिमिटरको कालोबजारी गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा ५ दिन पहिले
तपाईंको मास्क खै ? अभियान शुरु ३ हप्ता पहिले
हिमालयसँग मर्जर सम्झौता गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहित सात कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? २ दिन पहिले
त्रिभुवन विमानस्थल: पिकअप गर्न लाइनमा हरियो प्लेटका गाडीहरु २ हप्ता पहिले
रिलायन्स फाइनान्सको सभा पारित गर्यो १०.५३ प्रतिशत लाभांश १ हप्ता पहिले
आज आमाको मुख हेर्ने पर्व, देशभर श्रद्धा भक्तिसाथ मनाइँदै ५ दिन पहिले
विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने योजना ल्याउन माग २ हप्ता पहिले
सामुदायिक एम्बुलेन्स खरीदका लागि स्थान निवासीद्वारा रकम हस्तान्तरण ४ हप्ता पहिले
रसुवामा पाँच हेलिप्याड निर्माण हुँदै २ हप्ता पहिले
संविधान दिवसको अवसरमा नेपालको झण्डा सहित ¥याली २ वर्ष पहिले
बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु १ वर्ष पहिले
लक डाउनमा के-के गर्न पाइँदैन ? १ वर्ष पहिले
के तपाई पनि एसईईमा ग्रेड कम आयो भनेर टेन्सनमा हुनुहुन्छ ? २ वर्ष पहिले